Lafta-gareen oo lagu soo dhoweeyay Muqdisho, kulan degdeg ahna la yeeshay Xasan Kheyre - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Lafta-gareen oo lagu soo dhoweeyay Muqdisho, kulan degdeg ahna la yeeshay Xasan Kheyre - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Lafta-gareen oo lagu soo dhoweeyay Muqdisho, kulan degdeg ahna la yeeshay Xasan Kheyre
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa lagu soo dhoweeyay magaalada Muqdisho.
Waxaa Garoonka uga hortegay Wasiiro, xildhibaanno, iyo mas’uuliyiin kala duwan, isagoo la filayo inuu ka qeyb galo shirka Wadatashiga Doorashooyinka ee Muqdishouinkastoo uu hore u qaadacay shirkaasi.
Daqiiqado kadib imaanshihiisii Muqdisho, wuxuu kulan gaara la yeeshay Ra’iisul wasaarihii hore Musharax Xasan Cali Kheyre oo ay ka wadahadleen xaaladda Doorashada iyo shirka Wadatashiga ee ka furmaya Muqdisho.
Lafta-gareen ayaa noqonaya madaxweynihii ugu dabnbeeyay ee Mamaul Gboleedyada oo soo gaara Mudisho, iyadoo ay hore ugu suynaayeen dhammaan afarta madaxweyne ee maamullada kale.
Previous articleFaahfaahin: Dagaal laba Ciidan ku dhex maray Xaafad ka tirsan Muqdisho
Next articleWasiirka Amniga oo Hay’adda NISA ku Amray in Taliska & Ciidamadeeda kala baxdo Garoonka Muqdisho